Q & A – စာမကျြနှာ 77 – Healthy Life Journal
ကလေး ၉လ ရှိတဲ့အထိ ရာသီသွေးပြန်မပေါ်သေးလို့ပါ . . .
မေး ။ ။ ဆရာရှင့်. . သမီး ပထမ ကလေးတုန်းက ၈ လဆိုရင် သွေးပြန်ပေါ်ပါပြီ။ အခု ဒုတိယကလေးက ၉လပါ။ သွေးမပေါ်သေးဘူး။ သမီးဘာလုပ်ရမလဲရှင့်။ပြောပြပေးပါနော်။ သြဂုတ်မေလေး(FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် မှဖြေကြားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြေ ။ ။...
ဘီပိုး၊ စီပိုး ကူးစက်မှုကို ချက်ချင်းသိနိုင်သလား . . .
မေး ။ ။ HBV, HCV infection ကူးစက်မှုကို ချက်ချင်းသိနိုင်ပါသလား ဆရာ။ သဲဆု (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် မှဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြေ ။ ။ HBV, HCV ပိုး ကူးစက်မှုကို ချက်ချင်း မသိနိုင်ပါ။...
အသံ ခဏ ခဏ၀င်နေပါတယ် . . .
မေး ။ ။ အသံခဏ ခဏ ၀င်နေလို့ အသံကြည်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ။ အအေးမိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်း ဖြစ်နေတာပါ။ ဦးထွန်း၊ လှည်းတန်း။ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် မှဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ။ အအေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်ပြီး အသံဝင်တာမျိုးဆိုရင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။တစ်လကျော်တဲ့အထိဖြစ်နေရင် ချောင်းဆိုးပြီး...
သွားနုတ်ပြီးချိန် ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာ . . .
မေး။ ။ သွားနုတ်ပြီး နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာက ဘယ်လောက်ကြာရင် သက်သာနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ ကိုထွေး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်(မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။ ။ သွားနုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ပုံမှန်ကတော့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးဘာမှ မဖြစ်တတ်ပါဘူး။ သွားနုတ်ပြီး နာကျင်မယ့်...
အရိုးရောဂါကို ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး စစ်ဆေးခြင်း
မေး ။ ။ အရိုးရောဂါရှာဖွေရာမှာ ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး စစ်ဆေးတာရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်ကို သိပါရစေဆရာ။ ဦးမောင်မောင်(လှိုင်မြို့နယ်) ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုး ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ။ အရိုးရောဂါတစ်ခုခုကို ကုသတော့မယ်၊ ရောဂါစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ရိုးရိုးဓာတ်မှန်ကိုအရင် ရိုက်ခိုင်းပါတယ်။ ရိုးရိုးဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်မှသာလိုအပ်ရင်...
ဆီးချိုရောဂါရှိသူ လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်းမောနေတယ် . . .
မေး။ ။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်နေတာ ကျွန်တော့် မိခင်ပါခင်ဗျာ။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်ရင် မောမောနေတယ် ခင်ဗျ။ ဘယ်လိုကြောင့် မောတာပါလဲ ခင်ဗျ။ ကိုကျော်လင်း (FB) ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။ ။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူမောရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ နှလုံးသွေးကြော...
ချောင်းဆိုးနေသည့် အချိန် ရှောင်သင့်၊ စားသင့်သော အစားအသောက်
မေး။ ။ ချောင်းဆိုးနေတဲ့ အချိန် ဘယ်လို အစားအသောက်တွေကို ရှောင်သင့်သလဲ၊ ချောင်းဆိုးသက်သာအောင် ဘာတွေ စားပေးသင့်သလဲ။ မိုးမိုးခင်၊ တွံတေး။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပါသည်။ ဖြေ။ ။ ချောင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာ အဆီများတဲ့ အစာ၊ဆီကြော်စာ၊ ဟင်းအနှစ် စတာတွေကို...
အတွင်းတိမ်ကို မိုးကြိုးသွားနဲ့ ကုလို့ရသလား . . .
မေး။ ။ ကျွန်တော့်ဦးလေးက အတွင်းတိမ်ဖြစ်တာ ခွဲစရာမလိုဘူး၊ မိုးကြိုးသွားနဲ့ကုလို့ရတယ် ပြောလို့ပါ။မိုးကြိုးသွားနဲ့ ကုတာက ကောင်းကျိုးရှိပါသလား၊ဆိုးကျိုးဖြစ်မှာ စိုးရိမ်လို့ပါခင်ဗျား။ ထွန်းဝင်း၊ ညောင်ဦး။ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။ ။ အတွင်းတိမ်ကို မိုးကြိုးသွားနဲ့ ကုတယ်ဆိုတာက မိုးကြိုးသွားနဲ့...
ရာသီလာရင် ဘယ်လောက်များများ လာတတ်သလဲ . . .
မေး။ ။ ရာသီတစ်ကြိမ်လာရင် ဘယ်လောက်အထိများများ လာတတ်ပါသလဲ။ နေနေလွင်၊ မရမ်းကုန်း။ ဒေါက်တာစိုးလွင်(သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေ။ ။ တချို့က ၃ ရက်၊ တချို့က ၄ ရက်လာတတ်ပြီး ၃ ရက်နဲ့ ၇ရက်ကြားလာရင် ပုံမှန်ပဲလို့ ပြောကြပါတယ်။...
အရေပြား ယားယံနေပါတယ် . . .
မေး ။ ။ အခုတလော အရေပြားက မကြာခဏ ယားယံနေလို့ပါ။ အရေပြား ယားယံတာက ရောဂါရှိ လို့ပါလား ခင်ဗျာ။ ထွဋ်မင်း (FB) ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ။ ယားတာက အရေပြားနဲ့...
Page 77 of 95« First‹ Previous737475767778798081Next ›Last »
ဇှနျ လ၊ 2020 ခုနှဈ